Good Brothers' Co., Ltd မှ Sr. Auditor ( Head Office) | MyJobs
/ Sr. Auditor ( Head Office)
 လုပ်ငန်းအလိုက် စစ်ဆေးနိုင်ရန်လစဉ်စစ်ဆေးရေး Plan များရေးဆွဲပြီး Manager ထံတင်ပြရမည်။
 ထုတ်ပြန်ထားသော SOP နှင့် စစ်ဆေးရေးလမ်းညွှန်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။
 ရေးဆွဲထားသော Plan အတိုင်း ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
 တာဝန်ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းကိုလည်း တာဝန်ယူစစ်ဆေးရမည်။
 Junior မှ တွေ့ရှိသည့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို ပြန်လည်စီစစ်သုံးသပ်ရမည်။
 ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ထားခြင်းရှိမရှိ စီစစ်ရမည်။
 လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လေလွင့်မှု၊ ဆုံးရှူံးမှု၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိနှင့် မသမာမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုရှိမရှိစီစစ်ရမည်။
 ငွေကြေးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု၊ မသမာမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု ရှိမရှိနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုရှိမရှိ စီစစ်ရမည်။
 လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအား စီစစ်တင်ပြရမည်။
 အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိ စီစစ်တင်ပြရမည်။
 ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းများအား မှတ်တမ်း (Register) ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်။
 Risk Area များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်သုံးသပ်ပြီး Manager ထံတင်ပြရမည်။
 အပြီးသတ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအား Manager ထံတင်ပြရမည်။
 အခါအားလျော်စွာ နယ်ဆိုင်ခွဲများနှင့် SBU များသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရမည်။
 ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း လိုအပ်ပါက ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
 အထက်လူကြီးများ၏လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောစေခိုင်းချက်အား လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
 ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
 ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိရမည်။